फर्मुला सिकाउछु भन्दै विजय शाहीले सुर्खेतमा ४५ लाख लिएको खुलासा, पि’डितहरु आए मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 24, 2021 AdminLeaveaComment on फर्मुला सिकाउछु भन्दै विजय शाहीले सुर्खेतमा ४५ लाख लिएको खुलासा, पि’डितहरु आए मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, ८ श्रावन । अमेरिकी मेमरी च्याम्पियन नेल्सन डेलिससंगको अन्तर्वार्ता पछी पुन: आ.लो.चित बनिरहेका आफुलाई मेमरी किङ्ग बताउने विजय शाहीको अर्को क.र्तुत बाहिरिएको छ । विजय शाहीले सुर्खेतको विद्यालयबाट आफ्नो विद्या सिकाउने भन्दै करिब ४५ लाख रुपैया लिएको खुलासा भएको छ ।
शाहीले ६ महिना अगाडी विद्यार्थीहरुलाई क्लास दिन्छु भनेर करिब ९०० विद्यार्थीबाट प्रतिव्यक्ति पांच हजारको दरले ४५ लाख उठाएको सुर्खेत कै पिडित बसन्त वि.ष्टले बताएका छन । ति विद्यार्थीहरुसंग २० दिन मै मेमरी सिकाउने भन्दै पैसा उठाएको वि.ष्टले बताए । पिडितहरु अहिले एक आपसमा रकम तिरेको रसिद संकलन गरेर आफ्नो ठ.गिएको पैसा फिर्ता लिन मिडियाको सहारा लिन थालेका छन ।
विजय शाहीलाई सम्पर्क गर्दा मिडियामा नजानु भन्ने गरेको वि.ष्टले बताए । तर पछिल्लो समय आएर शाहीले फोन नै नउठाएपछि उनीहरु मिडियाको सम्पर्कमा आएका हुन् । विजय शाहीले आफ्ना मान्छेहरु सुर्खेतमा खटाएर रकम उठाएर ठ.गिमा लागेको पिडितहरुको आ.रोप छ । पिडितहरुका अनुसार पुस्कल शर्मा र ओमले त्यहाँबाट रकम उठाएका थिए ।
विजय शाहीको कुरामा विस्वास गरेर कोहि पनि न.फ.स्न सुर्खेतका पिडितहरुले सल्लाह पनि दिएका छन । पिडितहरुसंग गरिएको कुराकानी यहाबाट हेर्नुहोस्ः